पाँच वर्ष मोटरसाइकल नै चढ्छु, जनताको जस्तै जीवनशैली अपनाउँछुः अध्यक्ष विक (भिडिओ) – Nepal Press
कामै नगरी भुक्तानी लिई भ्रष्टाचार गरेकाहरुको छानबिन गर्न समिति गठन गर्छु
२०७९ जेठ २५ गते १७:२०
सुर्खेत । सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिकामा अध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन् नेकपा माओवादी केन्द्रका खड्क विश्वकर्मा ‘विवश’ । २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा जिल्लाभर माओवादी केही वडामा मात्रै सीमित रहेको थियो । यो वर्ष भने नौ पालिकामध्ये चौकुने गाउँपालिकामा माओवादीले विजयको झण्डा फहराएको छ । चौकुनेका अध्यक्ष विकले नेपालप्रेससँग कुरा गर्दै आफूले अबका पाँच वर्ष मोटरसाइकल चढ्ने बताए । पालिकाको गाडी भने बिरामी ओसारपसार गर्न प्रयोग गर्ने उनले सुनाए ।
उनले अलग्गै भान्से र अलग ड्राइभर नियुक्त नगर्ने बताउँदै जनताकै जस्तो जीवनशैली अपनाउने प्रतिबद्धतासमेत जनाएका छन् । उनले हामीसँगको कुराकानीमा समृद्ध चौकुने देखेको बताएका छन् । गाउँपालिका अध्यक्ष खड्क बिकसँग नेपालप्रेसकर्मी शेरबहादुर थापाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश नेपालटकमा –
– २०७४ सालमा जिल्लाका केही वडामा सीमित भएको माओवादीले यसपटक चौकुनेको अध्यक्षमा नै जित्यो, यो कसरी सम्भव भयो ?
जनताको अपार मायाले जीत हात पारिएको हो । जब जनताको भावना बुझ्न सकिन्छ तब जनताको माया, प्रेरणा लिन सकिन्छ, जनताको विश्वास लिन सकिन्छ । त्यही विश्वासको आधारमै गाउँपालिका जितेको हो ।
– लामो समय जनयुद्ध लड्नुभयो । दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गरेर आउनुभएको छ । दलित, पिछडिएका जनताले धेरै आशा गरेका पनि होलान् । ती आशा कसरी पुरा गर्नुहुन्छ ? उनीहरुका आशा के के पाउनुभएको छ ?
सामान्यतयाः चौकुने गाउँपालिकालाई लुकेको कर्णालीका रुपमा मैले चित्रण गर्ने गरेको छु । कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेत हो भनेर चौकुनेवासीले पत्याउनै नसकिने अवस्था छ । सुर्खेतलाई राजधानीको जिल्लामात्रै भन्न सकिन्छ, राजधानी भन्न सकिँदैन । यहाँ थुप्रै समस्या छन् । शिक्षाका समस्या छन्, खानेपानीका समस्या छन्, स्वास्थ्य, बाटोघाटोका समस्या छन् । अन्य सामाजिक क्षेत्रका समस्या छन् । यी थुप्रै समस्या समाधान गर्ने चुनौती मेरो अगाडि छ । यो चुनौतीलाई मैले सम्भावना हुन् भनेर अवसरको रुपमा लिएको छु ।
यहाँका विभिन्न जातजाति र मूलतः आधारभूत वर्गहरु धेरै छन् । यो वर्ग गरिब छ, जो दैनिक छाक टार्न नसक्ने छन् । दैनिक १८ घण्टा काम गर्दा पनि अझै पेटभरि खान नपाउने वर्ग छन्, त्यो वर्गमा निकै समस्या छ । त्यो वर्गको सेवा गर्ने नै गाउँपालिको मुख्य उद्देश्य रहनेछ ।
– कसरी गर्नुहुन्छ सेवा ?
पहिलो कुरा त म वर्ग पहिचान गर्छु । अहिलेसम्म को मान्छेले खान पाएको छ र को भोकै छन् भन्ने कुराको पहिचान स्थानीय सरकारले गरेको छैन । पहिलो नम्बरमा मैले आधारभूत वर्गको पहिचान गर्ने र उनीहरुलाई एउटा कार्डको व्यवस्था गर्ने योजना छ । वर्ग पहिचान भइसकेपछि हामी कार्डको व्यवस्था गर्छौं । अनि त्यसको पहिचान जब खुल्छ, त्यसपछि उसलाई के के सहयोग गर्दा उसको जीवनस्तर बदलिन्छ, हामी त्यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँछौं ।
मलाई लागेकै भरमा एकदुई जनालाई सहयोग गरेकै भरमा समस्या समाधान हुनेछैन । विधिमा टेकेर, निश्चित विज्ञको समूह बनाएर वर्गको पहिचान गर्ने र त्यसपछि समाधान गर्ने योजना बनाएर अघि बढ्छौं ।
– तपाईंहरुलाई आधारभूत वर्गको पहिचान गर्न कति समय लाग्छ ?
मान्छे चिन्नलाई समस्या छैन । म सरर मान्छे सबै चिन्छु । मैले देख्ने नजर र विज्ञहरुले देख्ने नजर फरक हुन्छ किनकि म सबै कुराको विज्ञ होइन । मलाई यति कुरा थाहा छ कि त्यहाँ समस्या छ । तर, त्यो समस्यामा परेका व्यक्ति को को हुन् भन्ने कुराको पहिचान विज्ञहरुले गर्नुपर्छ ।
– पालिका केन्द्र पुग्ने सडकमै समस्या छ । तपाईंहरुको कार्यकालमा वीरेन्द्रनगरदेखि पालिका केन्द्रसम्म पुग्ने बाटो फिलिलि बन्छ ?
म पुरै कार्यकाल होइन आधा कार्यकालकै अवधिमा बाटो राम्रो बनाउने प्रतिबद्धता जनाउँछु । आधा कार्यकालमै यो बाटो चौकुने गाउँपालिका पार गरिसकेको हुनेछ भन्ने मेरो विश्वास छ किनभने त्यहाँका जनप्रतिनिधि नै कर्णाली प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीको रुपमा विन्दमान विष्ट हुनुहुन्छ ।
वीरेन्द्रनगरदेखि चौकुनेसम्मको दुरी ६० किलोमिटर हो । ३० किलोमिटर बाटो बड्डीचौरसम्म कर्णाली राजमार्गले बनाइसकेको छ । बड्डीचौरदेखि खम्बागाडेसम्मको सडकको प्रदेश सरकारले टेण्डर आह्वान गरिसकेको छ । खम्बागाडेदेखि गुटु खोलासम्मको सडक निर्माणको टेण्डर प्रक्रियामा छ ।
गुटु खोलादेखि खम्बागाडेसम्मको ४२ किलोमिटर बाटोका लागि संघीय सरकारका पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग कुरा गरेको छु । चौकुनेको जनजीवनका समस्याबारेमा मैले उहाँसँग सहयोग मागेको छु । उहाँले अर्थमन्त्रीज्यूसहित अन्य निकायमा सहयोग गर्न निर्देशन पनि दिनुभएको छ । छिटोभन्दा छिटो उक्त सडक खण्डको टेण्डर गर्न लगाउँछु भन्नु भएको छ । म एकपटक भनेर छोड्नेवाला छैन । जबसम्म त्यहाँ बाटो सुरु हुँदैन, तबसम्म मेरो ड्युटी भनेकै नेताहरु र मन्त्रीहरुसँग लविङ गरिरहनेछु ।
गाउँपालिकामा आउने पैसाले त्यो बाटो बनाउन सम्भव छैन । हामीसँग भएको सबै पैसा लगायो भने पनि त्यो बाटो बन्दैन । हामीले सानातिना बाटाहरु, खानेपानी, शिक्षा, रोजगारका कार्यक्रमहरु, कृषि क्षेत्रलाई उठाउने काम गर्नुपर्नेछ । त्यसकारण मैले त्यो बाटोका लागि संघीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग निरन्तर पहल गरिरहनेछु ।
– तपाईंको वारिपट्टिको गाउँ अँध्यारो छ, पारि कैलाली उज्यालो छ । यसमा के भन्नुहुन्छ ?
यो बिजुलीबारे अहिले दुइटा तरिकाबाट कुरा चलिरहेको छ । एउटा ३३ केभी प्रसारणलाई वीरेन्द्रनगरबाट बाबियाचौरसम्म जाने र त्यहाँबाट उता लैजाने भनिएको छ । त्यसका लागि पोलहरु गाडी सकिएको छ भने रुख कटानको अनुमतिसमेत पाइसकेको छ । कानूनका कारण तार तान्न रोकिएको थियो । यसमा लगातार अर्थमन्त्री विष्ट लगातार लागिरहनुभयो र अन्ततः अहिले सफल हुनुभएको छ । रुख काट्नेबित्तिकै तार तानिन्छ ।
अर्को कुरा, चौकुने यस्तो गौरवको बनेको छ, जहाँ एसियाकै राम्रो सिमेन्ट उत्पादनका लागि चाहिने चुनढुङ्गा पर्याप्त मात्रामा छ । सिमेन्ट उद्योग स्थापनाका लागि सोनाकाँडास्थित निर्माण कम्पनीले काम अघि बढाउँदै छ । लखरपाटा सिमेन्ट कारखानाका लागि वडा नं ११ मा ४०० रोपनी जग्गा उनीहरुले लिइसकेका छन् ।
बेतान कर्णाली पनि अब अघि बढ्दैछ । त्यही कारण पनि त्यहाँ तत्काल बिजुली आवश्यक पर्ने र त्यसलाई ३३ केभी प्रसारणलाइनले नधान्ने अवस्था छ ।
लम्की, राजकाँडा हुँदै घाटगाउँ जाने गरी उच्च गतिको प्रसारणलाइन बनाउँदा सिमेन्ट कारखानालाई र बेतान हाइड्रोलाई पनि काम लाग्ने र त्यसले चौकुनेका जनताका लागि पनि फाइदा हुने देखिएको छ । कर्णाली प्रदेशका सिंचाइ तथा जलस्रोतमन्त्रीसँग मेरो कुरा हुँदा यो वर्ष आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको बताउनुभएको छ ।
– त्यहाँका जनताले अरु के अपेक्षा गर्ने ?
पहिलो कुरा हामीबाट गर्ने अपेक्षा भनेको पारदर्शिता हो । मैले भ्रष्टाचारलाई निर्मूल पारिदिन्छु र त्यसमा कही पनि गल्ती गर्दिनँ । म हिजो युद्ध लडेर आएको मान्छे हुँ । युद्ध लड्नुको अर्थ मान्छेलाई न्याय दिनु थियो र भ्रष्टाचारमुक्त गर्नु थियो । म व्यक्तिगत जीवनमा भ्रष्टाचार गर्दिनँ र अरुलाई पनि गर्न दिन्न । यति गर्नेबित्तिकै जनताको हातहातमा, घरघरमा विकास पुग्छ । पालिकाको ३८ करोड बजेट भनेको सानो होइन । हिजो हामीले पाँच लाख, दश लाख बाँडेका थियौं, मात्र जनता पनि इमानदार भइदिनु पर्‍यो ।
जनताले यो रुपैयाँ हामीलाई खानका लागि आएको हो भनेर बुझ्नुभएन । बाँकी मैले गर्ने काममा कहीकतै कमजोरी बाँकी राख्दिनँ । यस्तो भयो भने सर्लक्कै विकासले सबैलाई छुन्छ । अनि गरिबहरुलाई कसरी उठाउने भन्ने काममा लाग्न सजिलो हुन्छ किनभने जुन वर्गको मैले राजनीति गर्दै आएँ, लामो समय सर्वहारा वर्गीय पक्षधरता लिएँ, त्यसबाट गरिबहरुको जीवनस्तर नउठाइकन, गरिबहरुलाई खान र बाँच्न सक्ने नबनाइकन मैले राजनीति गर्नुको अर्थ छैन ।
– तर अहिले माओवादी नेताहरु सुविधामुखी भए भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ । तपाईंले भन्ने एउटा र गर्ने अर्कै हुने हो कि ?
जनताको बीचमा जे बाचा गरेको थिएँ, त्योअनुसार मैले सरकारी गाडीको सुविधा लिएको छैन । मैले चुनावमा नलिने भनेको थिएँ, म अहिले आफ्नै मोटरसाइकल चढिरहेको छु । कर्णाली प्रदेश २, ००१ प ५७५८ नम्बरको मोटरसाइकल मसँग छ । पाँच वर्ष म यही मोटरसाइकल चढछु । जनतालाई मेरो मोटरसाइकल नम्बर टिपेर राख्न भनेको छु ।
गाउँपालिकामा भएको जुन गाडी छ, त्यसलाई ज्येष्ठ नागरिक, जो ७० वर्षमाथिका हुनुहुन्छ, उहाँलाई उपचारका लागि कतै लैजानु पर्‍यो भने उपलब्ध हुनेछ । त्यो गाडीको पट्टा नहुने र नझ्याक्ने भएकाले त्यो गाडी उहाँहरुका लागि राम्रो हुनेछ । सुत्केरी व्यथा लागेर अस्पताल पुर्‍याउनुपर्ने गर्भवती महिलाहरुलाई पनि त्यो गाडीमा चढाएर लैजाने गरी मैले प्रस्ताव राखेको छु किनभने हामी त ट्याक्टरमा चढे पनि भयो । सुत्केरी आमा, ज्येष्ठ नागरिकलाई अप्ठ्यारो छ नि !
गाडी, ड्राइभर र छुट्टै भान्से सुविधा नलिने मेरो प्रतिबद्धता हो । हरेक ६–६ महिनामा खर्च सार्वजनिक गर्ने मेरो योजना छ र म त्यो गर्छु । पारदर्शी रहने, जनता जुन तहमा छन्, म त्यही लेभलमा बाँच्छु किनभने मैले गाडी चढे भने बाटो देख्दिनँ, बाटो ड्राइभरले मात्रै देख्छ । पानी आए पनि बाटो देख्न मैले पर्दैन । धूलो–हिलो केही देखिँदैन । जनताको जीवन कस्तो चलिरहेको छ भन्ने कुरा मैले भोगेँ भनेमात्रै जनताको समस्या समाधान गर्न सक्छु ।
– अन्त्यमा छुटेका के छन् कि ?
मेरो अगाडि दुइटा चुनौती छन् । एउटा, धेरै जनाले जागिरको अपेक्षा गर्नु, विवशलाई चुनाव जितायो भने जागिर पाइन्छ भन्ने धेरैको अपेक्षा छ । मेरो मुख्य उद्देश्यमा यस्तो धेरै प्रेसर आएछ भने मैले चौकुनेलाई बनाउने जे टार्गेट लिएको छु, त्यसमा असर पर्न सक्छ । मुख्य कामभन्दा सहायक काममा मैले ध्यान दिनुपर्ने हुनसक्छ ।
दोस्रो, यहाँभन्दा अगाडि जनताले भ्रष्टाचारका धेरै कुरा उठाएका छन् । काम पटक्कै नभएको तर भुक्तानी लिइसकिएका धेरै योजनाहरु देखिएका छन् । अब मैले यसलाई यस्तै छोडिदिउँ पालिकामा नजिर बस्ने खतरा छ । तपाईंमात्रै आएर हामीलाई प्रेसर गर्ने, यसअघि कामै नगरेर पैसा दिइएको थियो भन्ने कुरा उठ्न सक्छ । तसर्थ यसलाई छानबिनको दायरामा ल्याउन मलाई चुनौती छ ।
कामै नगरी भुक्तानी लिइएका योजना, हातै नछोइकन भुक्तानी लिएको धेरै भेटियो । भ्रष्टाचार गरेको पाइएको छ । त्यस्ता योजनाका बारेमा निकट भविष्यमै मैले कार्यपालिका सदस्यकै नेतृत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउँछु । त्यसको विस्तृत रिपोर्ट मिडियाबाटै म सार्वजनिक गर्छु ।
प्रकाशित: २०७९ जेठ २५ गते १७:२०
One thought on “पाँच वर्ष मोटरसाइकल नै चढ्छु, जनताको जस्तै जीवनशैली अपनाउँछुः अध्यक्ष विक (भिडिओ)”
लछिराम ढकाल says:
चौकुने को पारी पट्टि चै कहा उज्यालो छर जन्ता जान्न चाहान्छ्न